ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन को को लागे ? – Himshikharnews.com
ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन को को लागे ?
१४ असार २०७७, आईतवार २२:५९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन देशभित्र र बाहिरको शक्ति लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले भारतको राज्य संयन्त्र नै आफूलाई हटाउन सक्रिय भएको खुलेरै बोले । सँगै देशभित्रका केही नेताहरु पनि लागेको भने । उनीहरुको नाम भने खुलाएनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले यस्तो समयमा यसबारे बोले जतिबेला पार्टी स्थायी कमिटि बैठक चलिरहेको छ । १० असारबाट चलिरहेको बैठक १३ असारसम्म बसेर १६ असारमा फेरि बस्ने गरी तय भएको छ । उक्त दिन बस्ने बैठक निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसीसी पारित गर्न नदिन ओलीइतरको समुह नेकपाभित्र सक्रिय छ । जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम छन् । उनीहरुको समुह एकजुट भई ओलविरुद्ध केन्द्रित छ । प्रचण्डले ९ असारमा बालुवाटार बैठकमा ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन भनिसकेका छन् । १० असारमा स्थायी कमिटि बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले घुमाउरो तरिकाले यही संकेत गरेका थिए ।
ओलीलाई साथ दिदै आएका गौतम यसपटक बिच्किएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन गौतमले साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि उनकै साथ थियो । यसअघि सत्ता संकटमा पर्दा गौतमले नै साथ दिएका थिए । यसपटक भने गौतमले ओलीसँग आफ्नो अनगिन्ती असन्तुष्टि रहेको खुलाइसकेका छन् । स्थायी कमिटि बैठकमा हिजो बोल्ने क्रममा पनि उनले ओलीतर्फ संकेत गर्दै महाकाली सन्धीमा गल्ती भएकोले पार्टीले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । स्मरणीय रहोस् तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता ओली महाकाली सन्धी संसदबाट ४ असोज २०५३ मा पारित गराउन सक्रियताका साथ लागेका थिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीको चर्को आलोचक बनेका छन् । उनले स्थायी कमिटि बैठकमा ओलीले बोली सिध्याएपछि उठेरै आलोचना गरेका थिए । झलनाथ खनाल एमसीसीको विपक्षमा उभिएर ओलीलाई शुरु देखि अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् ।
यसबाहेक ओलीसँग भारत असन्तुष्ट रहेको खबरहरु बाहिर आइरहेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाले हिजो सोही आशयको समाचार सार्वजनिक गर्यो । जसमा ओली सरकारको दिनगन्ति शुरु भइसकेको उल्लेख छ । उनले भारतको स्वार्थलाई हानी पुर्याएको सम्म लेखिएको छ । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
ओलीले पार्टीभित्र सामना गरिरहेको चुनौती र भारतबाट आएको खबर र सुचनाहरुका आधारमा आज गम्भीर विषय बोलेका छन् । उनले सरकार ढाल्न नसक्ने भनेका छन् । तर, कतिपयले उनको आफूले राष्ट्रियताका साथ अतिक्रमित भुमि फिर्ता गर्न खोज्दा हटाउने चलखेल भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको विश्लेषण गरेका छन् । उनले आफैले पनि यही बोली बोलेका छन् । ओली सत्तामा रहेर अन्तिम लडाईं लडिरेहको स्पष्ट भइसकेको छ । यसकारण पनि उनी राष्ट्रवादको अस्त्रबाट लडाईं जित्ने प्रयासमा छन् ।reportersnepal.com